DOWNLOAD Airbus A380 Palestinian Airlines FS2004
Airbus A380 Palestiniana Airlines FS2004 HOT
Ity ny ela niandry fiaramanidina ny tsara amin'ny tena lehibe sy tsara 2d cockpit 3D modely raha oharina amin'ny hafa freeware (avy 2005).
Ny Airbus A380 dia roa tokotanin-tsambo, eran-body, efatra-maotera fiaramanidina fiaramanidina vokarina ny Eoropeana vondron'orinasa Airbus, ny sampan'ny ny EADS. Izany no lehibe indrindra manerana izao tontolo izao sy ny mpandeha fiaramanidina, noho ny habeny, seranam-piaramanidina maro no tsy maintsy hanatsarana ny toerana mba araka ny tokony handraisana izany. Voalohany atao hoe Airbus A3XX, ny fiaramanidina dia natao ny fanamby Boeing ny ampihimamba teo amin'ny tany malalaka-fiaramanidina tsena; ny A380 nanao ny sidina voalohany tamin'ny 27 Aprily 2005 ary nanomboka ny fanompoana ara-barotra tamin'ny Oktobra 2007 amin'ny Singapore Airlines.
Ny tokotanin'ny A380 ambony dia manitatra ny halavan'ny tranofiara manontolo, miaraka amin'ny sakany mitovy amin'ny fiaramanidina malalaka. Io dia ahafahan'ny efitranon'ny A380-800 misy velaran-tany 478 metatra toradroa (5,145.1 ft); 49% ny habaky ny gorodona kokoa noho ny fiaramanidina lehibe indrindra manaraka, ny Boeing 747-400 misy metatra toradroa 321 (3,455.2 ft), ary manome toerana hipetrahana ho an'ny olona 525 ao anaty kilasy famolavolana kilasy telo na hatramin'ny 853 ireo olona ao anatin'ny sehatry ny toekarena rehetra . Ny A380-800 dia manana endrika 15,400 kilometatra (8,300 nmi; 9,600 mi), ampy hanidina avy any New York mankany Hong Kong, ary hafainganam-pandeha Mach 0.85 (900 km / ora na 560 mph amin'ny haavon'ny fivezivezena).
Tamin'ny Oktobra 2012 nisy 262 didy mafy ho an'ny A380, izay 89 efa natolotra. Mba lehibe indrindra, fa 90 fiaramanidina, dia avy Mitambatra. (Source Wikipedia)
Downloads 43 620